सचिवहरुलाई अर्थमन्त्रीले भने-शतप्रतिशत नतिजा चाहियो | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
सचिवहरुलाई अर्थमन्त्रीले भने-शतप्रतिशत नतिजा चाहियो
२०७८ साउन ५, मङ्लबार, ५: २४PM
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको समस्याभित्रका समस्या समाधान हुन नसकेकोबारे सचिवहरुसँग चासो राखेका छन् । सोमबार बढी पुँजीगत खर्चको जिम्मेवारी पाएका विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उनले विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने कारणहरुबारे दर्जनभन्दा बढी विषयमा चासो राखेका हुन् ।
उनले सचिवहरुलाई सोधेका छन्, ‘पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण के हो ?, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पूँजिगत खर्चको अनुपात बढी हुनुको कारण के हो ? यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?’ अर्थमन्त्रीले दिएको यो होमवर्क सचिवहरुले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
‘अनुभवको लाभ देशले पाउनुपर्‍यो’
अर्थमन्त्री शर्माले एक जना कर्मचारी सचिवसम्म पुग्दा निकै अनुभवी भइसक्ने भन्दै त्यसको लाभ मुलुकले पाउनु पर्ने बताए ।
‘राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा राम्रो अनुभव र क्षमता तपाईंहरुमा छ’ उनले भने, सचिव हुँदासम्म तपाईंहरुसँग भएको थुप्रै वर्षको अनुभव राष्ट्र निर्माणको गम्भीर जिम्मेवारी पुरा गर्न उपयोग गर्नुहोस ।’ राजनीतिक नेतृत्व बेला-बेलामा आउने-जाने भई रहने भन्दै यो स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको बताए ।
राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी गम्भीर रुपमा केन्द्रित भएर सम्पूर्ण रुपमा प्रयोग गरेको आफूले अनुभुति नगरेको उनले बताए ।
‘आरोप लगायो भन्नुहोला, नमिठो होला, तर मलाई त्यस्तो लाग्यो । तपाईंहरुसँग भएको सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग तपाईंहरुले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको मैले पाइन,’ उनले भने ।
‘मन्त्रीले के गर्नुपर्छ काम दिनुहोस्’
कर्मचारीले चाहे जसरी काम गर्न नसक्ने कारण हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता समस्या आफुलाई जानकारी गराउन उनले आग्रह गरे ।
‘समस्या समाधान कसरी गर्ने ? त्यो मलाई भन्दिनुस् । एक, दुई, तीन, चार, पाँच यसो भयो भने यो गर्न सकिन्छ, हामी गर्छौं भन्ने एउटा कमिटमेन्ट चाहियो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले ? सरकारले के गर्नुपर्छ ?’
नेपालका अव्यवस्था पूर्ण विकास कार्यक्रम, योजनाविहीन योजना, राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित योजना अगाडि बढ्नुमा कर्मचारीको समेत हात रहेको भन्दै मन्त्रीलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन नमिल्ने उनले बताए ।
‘नहुने कुरा हुँदैन भन्न किन सक्नुहुन्न ? यो हुँदैन, यो गर्दैनौं किन भन्नु हुन्न ? किन मन्त्रीले भन्नेबित्तिकै यो गर्नैपर्छ र हुन्छ भन्नुहुन्छ ? तपाईंहरुको पनि दोष छ तर थोरै प्रतिशत,’ उनले भने ।
के हुन् अर्थतन्त्रको समस्याका जड ?
छलफलमा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको समस्या भित्रका केही जडलाई उत्खन्न गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले देखेको एउटा समस्या हो ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय’ ।
‘आफ्नै बाटो बनाउने, आफ्नै सरकारले बनाउने, आफ्नै रुख काट्न फेरि अर्को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता कार्यविधिहरु कसरी बन्छन् ? उनले प्रश्न गरे । यी गम्भीर विषय भएको भन्दै छलफल गर्न आहृवान गरे ।
‘विकासमा जनसहभागिता नहुनु’ अर्थमन्त्रीले देखेको अर्को समस्या हो । ‘विकासमा जनताको सहभागिता छैन, जनतालाई विकाससँग जोडेका छैनौं’, उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति होला, त्यो पनि एक ढंगले दुरुपयोगको अवस्थामा छ । त्यसले जनतालाई जोडेको मैले । यो मोडालिटी नै फेरौं ।’
अर्थमन्त्रीले बीना बजेटका योजना समेत छुट्याएर ल्याउन सचिवहरुलाई आग्रह गरेका छन् । खर्च नहुने ठाउँमा अधिक बजेट भएका योजना समेत सूचीकृत गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । सबै मन्त्रालयले यो तयार पार्न उनले आग्रह गरे । के काम गर्दा खर्च बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रतिवेदन नै बनाउन उनले सचिवहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘फेरि समस्या दोहोरिए नभन्नू’
अर्थमन्त्री शर्माले अर्को चुनावसम्म यही सरकार निरन्तर हुने भन्दै आगामी वर्ष पनि उस्तै समस्या लिएर नआउन सचिवहरुलाई आग्रह गरे ।
‘हरेक वर्ष उही रिपोर्ट गर्ने ? अर्को वर्ष म यो रिपोर्ट सुन्न चाहन्नँ,’ उनले भने । पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुने पर्ने भन्दै उनले त्रुटि आजैबाट सच्याउन लाग्नुपर्ने बताए ।
‘हामी साउनको ३-४ गतेमा छौं, अहिले सच्याऔं । तर, शतप्रतिशत नतिजा चाहियो,’ उनले भने । अहिले त कोभिड आदि इत्यादि भनेर सजिलै भएको होला भन्दै उनले अब बाहना नबनाउन आग्रह गरे ।
अघिल्लो लेखमाप्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे प्रधानमन्त्री देउवा
अर्को लेखमादेशभरीका धेरै सरकारी कार्यालयहरुको वेबसाइट बन्द